Hutungamiri - Sorrento Therapeutics
Sachigaro, Mutungamiri uye CEO
25+ makore echiitiko muiyo biotechnology uye hupenyu sainzi indasitiri
Dr. Ji vakavamba Sorrento uye vakashanda semutungamiriri kubva 2006, CEO uye Mutungamiri kubva 2012, uye Sachigaro kubvira 2017.
Munguva yekutonga kwake kuSorrento, akagadzira uye akatungamira kukura kunoshamisa kweSorrento kuburikidza nekutora uye kubatanidzwa kunosanganisira Bioserv, Scilex Pharmaceuticals, Concortis Biotherapeutics, Levena Biopharma, LACEL, TNK Therapeutics, Virttu Biologics, Ark Animal Health, uye Deliverysa Systems Lymphatic.
Akashanda seSorrento's Chief Scientific Officer kubva 2008 kusvika 2012 uye seInterim CEO kubva 2011 kusvika 2012.
Asati asvika Sorrento, akabata zvinzvimbo zvepamusoro kuCombiMatrix, Stratagene uye zvakare akavamba Stratagene Genomics, mubatsiri weStratagene, uye akashanda seMutungamiri & CEO uye Director weBhodi.
BS uye Ph.D.
Dr. Royal inyanzvi yemishonga ine makore makumi maviri ekukura kwekliniki uye nyaya dzezvokurapa. Nguva pfupi yadarika, aive Chief Medical Officer weSuzhou Connect Biopharmaceuticals uye, zvisati zvaitika, Concentric Analgesics. Anojoinha kuSorrento kwaaimbove EVP, Clinical Development uye Regulatory Affairs muna 20.
Akaita basa kana kubatsira mune akati wandei akabudirira NDAs, kusanganisira maNCE, 505 (b) (2) s uye ANDAs.
Dr. Royal ibhodhi rinopupurirwa mumishonga yemukati, mushonga wemarwadzo, anesthesiology ine zvimwe zvidzidzo mukugadzirisa marwadzo, mishonga yemishonga uye mishonga yepamutemo.
Anga ari Mubatsiri Purofesa weMishonga paUniformed Services University of Health Sayenzi, Mubatsiri Purofesa weAnesthesiology/Critical Care Medicine paYunivhesiti yePittsburgh Medical Center, uye Adjunct Purofesa paYunivhesiti yeOklahoma uye University of California San Diego.
Akadhinda zvakanyanya nezvitsauko zvemabhuku e190, zvinyorwa zvakaongororwa nevezera uye zvinyorwa / mapepa; uye anga ari mutauri akakokwa pamisangano yenyika nekunze
Mutevedzeri weMutungamiri Mukuru anoona nezvemitemo
Dr. Brunswick vane makore anopfuura makumi matatu nemashanu ezvinzvimbo zvepamusoro muIndasitiri Yakadzorwa kusanganisira anopfuura makore mapfumbamwe muUS FDA, Center for Biologics, Division of Monoclonal Antibodies.
Asati ajoinha Sorrento, Dr. Brunswick vaive Musoro weRegulatory Affairs and Quality paSophiris Bio, kambani inogadzira mushonga webenign prostatic hyperplasia nekenza yeprostate. Izvi zvisati zvaitika aive mukuru weRegulatory Affairs kuArena Pharmaceuticals ainyanya kurapa kwakanangidzirwa kuG Protein receptors.
Dr. Brunswick akatungamirira boka rekutonga paElan Pharmaceuticals rinotarisa paAlzheimer Disease uye marwadzo emusanganiswa, ziconotide.
Mutevedzeri weMutungamiri Mukuru R&D
Dr. Allen apedza makore anopfuura gumi nemashanu ari muindasitiri yebiotechnology achitungamira tsvagiridzo, budiriro yepamberi, uye kugadzirwa kwekiriniki kwekutanga kwemishonga inorwisa mavhairasi uye inorwisa kenza.
Vasati vajoinha Sorrento, Dr. Allen vakashanda saSainzi Director weOregon Translational Research and Development Institute (OTRADI), vachibatsirana neindasitiri uye vadyidzani vakadzidza pakutsvaga zvinodhaka uye mishandirapamwe yekunyoresa vamiriri yakanangana nekenza yehematologic, mapundu akasimba, uye hutachiona hwehutachiona.
OTRADI isati yasvika, Dr. Allen vakagadzira zvirongwa zvekuwanikwa paSIGA Technologies izvo zvakaratidza zvakananga-anoshanda antiviral akanangana nemavhairasi mumhuri dzebunyavirus uye filovirus pamwe neanotungamirwa-anonangidzirwa matanho ekupikisa huwandu hwakawanda hwehutachiona hwevanhu uye inosungira intracellular bacteria.
Dr. Xu vane makore anopfuura makumi maviri echiitiko semukuru mumaindasitiri ebiotech. Dr. Xu aive cofounder, mutungamiri uye CEO weACEA Biosciences (yakawanikwa neAgilent muna 20) uye ACEA Therapeutics (yakawanikwa ne Sorrento Therapeutics muna 2021). Anobatana Sorrento Therapeutics mushure mekutora, uye anoenderera mberi achishanda seMutungamiriri weACEA, mubatsiri we Sorrento Therapeutics.
Anga achitonga uye achitarisira ACEA yekuvandudza mushonga pombi yekuvandudza, zvidzidzo zvekiriniki, uye cGMP kugadzira nzvimbo.
Aive muvambi weiyo innovative label yemahara cell-based assay tekinoroji uye ane mutoro wehunyanzvi / kusimudzira chigadzirwa uye kudyidzana kwebhizinesi neRoche Diagnosis, kushambadzira kwepasirese kweACEA's proprietary tekinoroji uye zvigadzirwa, uye $250 miriyoni Agilent kutora kweACEA Biosciences.
Anga ari muongorori wevashandi uye sainzi wekutsvagisa kuGladstone Institutes, Iyo Scripps Research
Institute uye US Centers for Disease Control and Prevention. Ane pamusoro pe50 US patents uye
patent application uye yakaburitsa zvinopfuura makumi matanhatu zvinyorwa zvekutsvagisa mumajenari epasi rese, kusanganisira
Sainzi, PNAS, Nature Biotechnology, uye Chemistry uye Biology.
BS, MS, uye MD
Mutevedzeri weMutungamiri Mukuru weCommerce Operations
Dr. Sahebi anotungamira Sorrento's commercial operations function
Inounza anopfuura makore makumi matatu eruzivo rwemishonga kusanganisira yekushambadzira sainzi uye bhizinesi zano kuSorrento
Asati ajoinha Sorrento, akabata zvinzvimbo zvepamusoro naNovartis, Pfizer, naLilly vachigadzira analytics yekutengeserana uye nzira dzekushambadzira dzinofambiswa nedhata dzakakonzeresa kukura kwekutengesa kwezvinhu zvinopfuura makumi maviri zvinosvika blockbuster chinzvimbo munzvimbo dzeCardiovascular, Arthritis, Neuroscience, Diabetes, uye Oncology.
Mutendi akasimba kuti tsika dzekubatana dzinogadzira zvikwata zvinokunda
Mutungamiri Akapfuura, Pharmaceutical Management Science Association yeAmerica
BA, MBA uye Ph.D.
Amai Czerepak vane makore anodarika makumi matatu nemashanu ehunyanzvi hwemari nekushanda mumishonga yese yemishonga, biotechnology uye venture capital. Nguva pfupi yadarika akashanda seEVP uye Chief Financial Officer weBeyondSpring Inc., kambani yepasirese, yekiriniki padanho reoncology. Izvi zvisati zvaitika, akashanda seChief Financial Officer uye Chief Business Officer weGenevant Sayenzi, kambani inotakura lipid nanoparticle, uye semukuru wezvemari kune akati wandei ma biotechs. Ms. Czerepak vane makore gumi eruzivo rwekudyara mari sevaimbove Managing Director kuBear Stearns neJPMorgan, uye vaive Muvambi Mukuru Mukuru weBear Stearns Health Innoventures LP Amai Czerepak vakatanga basa ravo vaine makore gumi nemasere mu pharma huru muzvinzvimbo zvehutungamiriri zvemari, kuronga kwehurongwa, kusimudzira bhizinesi uye zvikwata zvekutanga zvekutengesa. Akatungamira mudiwa wepasi rose kutsvaga D35E10 (Humira®), izvo zvakazoguma nekutengesa kweBASF Pharma kuAbbott nemadhora mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe emadhora. Akaita basa rakakosha mukutora kwaRoche kweSyntex kwemadhora mazana mashanu nemakumi mana emadhora. Kwemakore apfuura, akabatsirawo mukusimudza mazana emamiriyoni emadhora kumakambani ebiotech nekutungamira mari, pamwe nekupa kwake seCFO uye nhengo yeBhodi. Ms. Czerepak vane BA magna cum laude in Spanish and Mathematics Education kubva kuMarshall University, MBA kubva kuRutgers University, uye Corporate Director Certificate kubva kuHarvard Business School.
Mutevedzeri weMutungamiri Mukuru, Corporate Communications uye Investor Relations
30+ makore echiitiko muiyo biopharmaceutical uye hupenyu sainzi indasitiri
VaCooley vakabata zvinzvimbo zvakasiyana-siyana zvekutengesa, kushambadzira, uye hutungamiriri hwekutengeserana kumakambani ane rombo rakanaka 500 uye vakatungamira kubudirira kuunganidza mari nekutanga kuedza kumakambani ehunyanzvi hwekuchengetedza hutano.
Vasati vajoinha Sorrento, Mr. Cooley vakatungamira kushambadzira kwepasi rose kuedza kwekutanga chigadzirwa nebasa reP&L paEli Lilly neCompany neGenentech munzvimbo dzechirwere dzinosanganisira Diabetes, Neurology, Immunology uye Rare Disease.
Pamusoro pezvo, akatungamirawo zvakakosha BD, mu-rezinesi, uye kuedza kwekubatanidza pasi rose uye muUS Izvi zvaisanganisira akawanda mabhizinesi ekuwedzera madhiri kuEurope, Middle East neAfrica, uye chibvumirano chekubatana chemadhora mazana mana eMM ku-rezenisi, kusimudzira nekutengesa. yekutanga GLP-400 agonist
Munguva pfupi yapfuura, Mr. Cooley vaiva CBO yeSofusa Business Unit paKimberly-Clark uye vakatungamirira kubudirira kwekutengesa nekubatanidza kuedza. Sorrento Therapeutics. Anoenderera mberi achitungamira chikamu cheLymphatic Drug Delivery system kuSorrento.
Mutevedzeri weMutungamiriri weBusiness Development
30+ makore echiitiko muBusiness Development, Kutengesa uye kutungamira kuedza mukutsvaga zvinodhaka, kusimudzira uye kudyidzana
Asati ajoinha Sorrento, VaFarley vakabata zvinzvimbo zvehutungamiriri kuHitGen, WuXi Apptec, VP weChii Accounts kuvaka uye kutungamirira boka repasi rose reBD; ChemDiv, VP weBD pa, achitungamira kuedza kwakawanda kugadzira makambani matsva ekurapa muCNS, Oncology uye Anti-infectives.
VaFarley vakashanda sechipangamazano kuzvikwata zvakasiyana-siyana zvekutungamira manejimendi uye maBOD kuti vagadzire nekutengesa midziyo yakafanana neXencor, Caliper Technologies neStratagene.
Akavaka network yakasimba mumakambani emishonga, biotech uye Venture Capital nharaunda. VaFarley vataura pamisangano yakawanda uye vakadhindwa muzvinyorwa zvakasiyana-siyana zvakaongororwa nevezera ravo
Mutevedzeri Mukuru weMutungamiri Neurotherapeutics BU
Dr. Nahama vanotungamira zvirongwa zveRTX zveutano hwevanhu nemhuka
Sechikwata chehutungamiriri hwenhengo, Dr. Nahama vanotsigira kuvandudzwa kwehurongwa, vanotarisira mapurojekiti akanyanya kukosha, vanofambisa kuenda kugadziriro yemusika, uye vanosimudzira kuedza kwemubatanidzwa wekunze.
Neshungu inotyaira mikana yeshanduro yekumhanyisa zvirongwa zvekusimudzira vanhu uku uchiunza matekinoroji angadai asiri kuwanikwa kumhuka dzinovaraidza.
Asati ajoina Sorrento, akapedza makore anopfuura makumi maviri nemashanu akabata mabasa epamusoro pasi rose achishanda muLife Sayenzi neBiotechnology yeSanofi, Colgate, Novartis, Merck, VCA Antech uye VetStem Biopharma.
DVM ine basa rekutanga rakanangana neR&D munzvimbo yekurwadziwa (miyedzo yekiriniki yezvipfuyo)